Ntinye nwa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ntinye nwa
Ọtụtụ n'ime anyị na-ahụkarị ịtụle tulip "ifuru March 8." Ee, nke a bụ osisi dị ala, ahịhịa na obosara, oblong epupụta nwere ihu na-acha ugwo mmiri na obere petals nwere ike ịhụ na kaadị ekele na n'aka ndị ikom na-agba ọsọ inye ha ụmụ nwanyị. Fọrọ nke nta ka mmadụ niile hụ tulips.
Atụmatụ nke ịme ihe ubi kwa ụbọchị, otu esi elekọta onye na-enweghị atụ nke akwa akwa
Ala nna nke ehihie bụ East Asia. Osisi a maara ihe a kpọrọ mmadu site na oge ochie, ma maka oge mbụ, sayensị malitere ikwu okwu n'ehihie na 1753. Onye na-eme nchọpụta nke Swedish bụ Karl Linney kpọrọ osisi gemerocallis, na-ejikọta okwu abụọ Grik: hemera (ụbọchị, ụbọchị) na callos (ịma mma). Aha a pụtara na ịma mma nke osisi ahụ na-adị ndụ otu ụbọchị.
Kedu ka esi eto eto n'ubi, na-akụ ma na-elekọta "ifuru nke ugwu"
A na-ewere oke osisi a na-atụ ugwu ugwu ka ọ bụ otu n'ime okooko osisi ndị dị egwu nke dị na ezinụlọ Asteraceae. N'ime ọhịa, edelweiss na-eto na ihe dị ka mita 2000 n'elu elu igwe. Ọ na-enwe mmasị na ebe dị egwu ma sie ike. Ị ma? E gosipụtara Edelweiss na uwe agha nke Switzerland. Edelweiss na-eto ruo 15 cm, ma ọ nwere ọtụtụ stalks.
Taa, anyị na-ekwu banyere ịghọ ndị isi clemit na Siberia. Ọtụtụ florists maara nke ọma na osisi a, ma ọtụtụ ndị kwenyere na shrub ahụ nwere ihu igwe na-enweghị atụ, ọ dịghịkwa etolite na ebe ugwu. Anyị ga-egosi nke ọzọ, họrọ ụdị dị iche iche kachasị mma ma gwa gị banyere iwu nlekọta. Otutu Clematis maka Siberia Ihe ndi di iche iche di iche iche di iche iche na-adighi nma ka ha kpoo na Siberia, nke nwere ike igbochi oke oyi na oyi na USSR.
Utu okooko osisi mara mma, kụrụ na ilekọta
Ogige Ubi Na Imperial Grouse bụ osisi mara mma, ya mere, ka anyị lebakwuo anya n'ịgha mkpụrụ ya, nlekọta na mmepụta ya. Hazel Grouse Imperial: nkọwa nke Imperial Grouse - ọ bụ kpamkpam ọ bụghị osisi dị egwu, ma ọ bụrụ na ọ na-elekọta ya n'oge na n'ụzọ ziri ezi, ọ gaghị enwe nsogbu na ya.
Otu esi akụ na-eto eto maffodil ke dacha
Mmalite nke oge opupu ihe ubi maka ọtụtụ anaghị ejikọta na ụbọchị na kalenda, ma ọdịdị nke okooko osisi mbụ, dị ka narcissus. Ụdị na-egbuke egbuke nke okooko osisi ndị na-adọrọ adọrọ na nnukwu stamens mgbe etiti oyi na osisi kụrụ aka na-emetụta ọbụna ndị mmadụ enweghị mmasị na agba. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ebe a na-arụ ọrụ, ị ga-eme ka ebe nchekwa dị na ya.
N'ime osisi ndị dị n'ime ime ụlọ, cacti so n'ime ndị mmadụ kachasị. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọdịdị ha nwere ike ọ gaghị adị ka ihe mara mma dị ka mpụga nke ndị ọzọ na-acha akwụkwọ ndụ bi na windo sill, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ ha. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta osisi a n'ụlọ, mgbe ahụ, ịmara banyere usoro mmeputakwa nke cactus ga-aba nnọọ uru.